Ingoma Yesihlanu Uthando lunobubele
Ukufundisa abantwana okokuba uthando lulungile yaye lunobubele yaye luquka izinto ezinjengokukhathalelana, ukwabelana nokuthembana.
Usenokubacela abantwana Ukuba bazobe umfanekiso wento abathanda ukuyenza nabantu ababathandayo. Thetha nabo ngezinto eziye zibenze bachwayite, izinto abathanda ukuzenza namalungu osapho lwabo.
Abantwana basuka kwiintsapho ezahlukeneyo kwaneendlela abakhuliswe ngazo azifani, kodwa yona imithetho yothando imele ze ifane.
Abantwana mabathandwe ngobulali
Mababonelelwe bagcinwe ngcono
Mabatye ukutya ngokwaneleyo
Banxibe impahla ecocekileyo
Makubekho umntu oqinisekisa Ukuba amazinyo abo acocekile kwanokuba bahlanjiwe
Iinwele zabo zichazwe kakuhle
Makubekho umntu ozakujongana neengxaki zabo Kubekho umntu ozakubanceda
Umntu obafundela amabali
Umntu wokubonwabisa xa beziva belusizi
Yinto entle ukuthetha ngesi sihloko ebantwaneni. Ukuba babona omnye woogxa babo e klasini, kucaca ukuba udinga unakekelo, abantwana bayakwazi ukuba baye kuxelela umzali okanye utishala khona ukuze ancedwe. Kungakuninzi okufundayo ngabantwana qha xa ungavulela inyoba yonxibelelwano lwentetho ekhululekileyo apho abantwana banokuthetha nawe nangayo nayiphi ingxaki, nokuba incinane kangakanani na.
Masithethe ngothando, kubalulekile ukuthandwa kwaye abantu abalubonisi uthando lwabo kuwe ngokukuvisa
ubuhlungu okanye ukwenza izinto ezikwenza ungaziva kamnandi. Abantu babonisa ukuba bayakuthanda ngokwenza izinto ozithandayo njengo ku- funda iincwadi, ukudlala imidlalo, ukonwaba, ukuthatha uhambo okanye mhlawumbi ukukubonisa ukuba ibhayisekile yakho uyikhwela njani.UThando kukwabelana nokukhathalelana. Abazali bethu kunye nabo abobantu basikhathalelayo bayaqinisekisa ukuba sigcineka kakuhle, bayasondla, basenza ukuba sihlambe amazinyo ethu, kwaye baqinisekise ukuba sineempahla ezicocekileyo zokunxiba, baphinde xa sigula basihambise basise kuGqirha. Kubalulekile ukuba sinonophelwe kakuhle ukuze sikhule sisempilweni, sonwabile kwaye somelele.
UThando Lumnene Amazwi engoma
Cula nam uzokufumanisa ukuba
Zininzi izinto ezimnandi esingazenza ukubonisa uthando lwethu
Okanye siye phandle sidlale ibhola
Ungandinceda ngebhayisekile yam
Zininzi kakhulu izinto
Zininzi kakhulu iindlela
Esingabonisa ngazo siyakhathala
Maninzi kakhulu amaxesha okuxelelana siyathandana
Ukuba unalo ixesha lokwabelana
UThando lumnene, UThando lunobubele
Cula nam uzokufumanisa,
Kumnandi ukwabelana ngezizinto nawe.
Ndingathanda ukwabelana nawe
Ndiyathemba ukonwabele ukucula nathi kuzo zonke ezingoma, kwaye uyakuzikhumbula zonke izinto ozifundileyo ngomzimba wakho okhethekileyo.
Khumbula ukuthi HAYI! ukuba ubani uzama ukukuphatha kumalungu akho angasese okanye ukuba abantu bazama ukwenza izinto ezikwenza ungaziva kamnandi okanye bayakuhlukumeza.
Khumbula umyalelo othi “Ukuba ayivakali ilungile- Ungayenzi!!” uphinde ukhumbule ukuxelela umntu ukuba uviswa ubuhlungu, okanye uyaphathaphathwa okanye uyahlukunyezwa nangayiphi na indlela, kwaye uqinisekise ukuba uyaqhubeka ukuxela kude kubekho okumamelayo.
Ungaze nakanye unikezele!!
Nihlale nikhuselekile nonke.